विष पिएका पूर्वलडाकुको आक्रोश– गणतन्त्र जनताको बैरी बन्यो
२०७५ मंसिर २० बिहीबार १६:२५:००
२०५८ साल । आगाको फिलिङ्गोजस्तो जेठको धूप । त्योभन्दा चर्को थियो– माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको राप–ताप । मध्यपश्चिम माओवादी आन्दोलनको ‘आधार इलाका’ थियो । मर्ने र मारिने क्रम तीव्र भएर हुनुपर्छ– मान्छे मरेका समाचार आश्चर्य र अनौठा हुँदैनथे ।
राज्य र विद्रोही दुवैतर्फका बन्दुकले गाउँ घेराबन्दी गरेकाले मृत्यु दैलामा कतिखेर आइपुग्ने हो, यसै भन्न सकिन्नथ्यो । चैत ४ गतेको मध्यरात अछाम सदरमुकाम मंगलसेनमाथि माओवादी छापामारले धावा बोले । सीडीओसहित ७७ प्रहरी, ५५ सैनिक, तीन कर्मचारी र दुई सर्वसाधारणलई जनयुद्धको आगाले निल्यो । मङ्गलसेन बजार क्षणभरमै भग्न बन्यो ।
त्यसपछि रिसाहा अरिङ्गालझैँ सेना मध्यपश्चिमका अक्करे भीर उक्लिएका थिए– माओवादी छापामार खोज्न ।
मङ्गलसेन आक्रमणको दुई महिनापछि हुनुपर्छ, सेनाको एक जत्था कुलप्रसाद भट्टराईको घर पुग्यो । “ओई ढोका खोल् !,” १३ वर्षका थिए कुलप्रसाद, टाटेपांग्रे लुगा लगाएका सेनाका हतियारधारी समूहले यति भनेको सम्झना छ ।
ढोका खोल्नै परेन । सेनाले आफैँ फुटाएर भित्र पस्यो । शुरूमा दमका दीर्घरोगी बाबुआमालाई कठालोमा समातेर धम्क्यायो– “माओवादी कहाँ लुकाएको छस् भन् ?” “थाहा छैन हजुर !,” बाबुआमा लुगलुग काँपिरहेका थिए । हतियारसहित गाउँ पसेका सेनासँग सुन्ने धीरता कहाँ हुनु ?
“फुकेका राँगाजस्ता, हान्ने गोरुजस्ता, अनेक देखिन्थे ती,” मृत्युको पञ्जाबाट उम्किएको त्यस रात उनको दिमागमा ताजै छ । त्यसपछि सेना जवानहरू दाजु हंषराजमाथि जाइलागे । पिठ्युँमा डङडङ लात्ती बजार्न थाले ।
घोडाको टापजस्ता बुट लगाएका सेनाको लात्ती कत्तिञ्जेल सहन सक्थे र दाजु, मुच्र्छा परिहाले । त्यस्तै एक घन्टा वितन्डा मच्चाएर तत्कालीन शाही सेना गाउँ छिर्‍यो । र, धेरैलाई बन्दुकको निशाना बनायो ।
सेना गएपछि बल्ल उनीहरूले सास फेरे– धन्न बाँचियो ।
“राज्यको बुट दाजुको पिठ्युँमा बज्रिएपछि १३ वर्षकै उमेरमा माओवादी आन्दोलनमा समाहित हुने निष्कर्ष निकालेँ,” भूमिगत हुँदाका शुरूआती दिन सम्झन्छन् कुलप्रसाद ।
१३ वर्षको किशोरवय । टाउकामाथि गरिबीको कालो बादल । घरिघरि वर्षने दुःखको वर्षात्–झरी ।
दाजु हंषले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेर रेडियो नेपालको क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्रमा अल्झिएका थिए । निर्धनले खिइएको दुब्लो अनुहार सुम्सुम्याउँदै कुलप्रसादलाई आमाले भनिन्, “सेनाले मारेछन् भने सँगै मरौँला, माओवादीमा चाहिँ नजा है !”
बाल मस्तिष्कमा विद्रोहको आगो फुकिसकेका थिए कुलले । गृष्ममास भएकाले रित्ता थिए फगटा । गहुँका ठोसाले चस्चस् बिझाउँथ्यो । त्यो भन्दा पीडादायी थियो–गरिबी । अझ दुःखदायी थियो– शाही सेनाको ज्यादती ।
भेडाको बगाल लिएर चौरतिर जाँदै थिए । खेतका गह्राभरि हँसिया–हथौडा अंकित राता झन्डा देखे र बजिरहेको थियो– हामी राता मान्छे...! माओवादीसँग मिसिने मौका खोजिरहेका कुललाई के चाहियो ? भेडालाई चौरमै छाडेर उनी माओवादीको कार्यक्रमको दर्शक बने ।
“बुर्जुवा शिक्षा पढेर परिवर्तन आउँदैन,” झन् पढ्नु पर्दैन भनेपछि किशोर मन खुसीले बुरुक्क उफ्रिने भइहाल्यो । “तत्कालीन राज्यले दाजुको पिठ्युँमा लात्ती नबजारेको भए म शायदै माओवादी बन्थेँ । दमनले प्रतिरोध निम्त्याउँछ भन्थे, मेरो हकमा पनि लागु भयो,” कुल अहिले सम्झन्छन् ।
सानैदेखि दुःख र अभावको कखरा सिकेका उनले माओवादी आन्दोलनमा समाहित हुँदा तीन कक्षा पढेका थिए । मनबहादुर बम ‘मयुर’ उनको सहयोगी बनेर ज्यान हत्केलामा राखेर हिँडेको जनयुद्धमा अभिभावकत्व निभाए ।
“बम र बारुदको मुस्लोका बीच उहाँले मलाई काँधमा राखेर लिएर हिँड्नुभो,” ‘मयुर’प्रति कृतज्ञ देखिन्छन् उनी । माओवादी आन्दोलनको अङ्ग बनिसकेपछि उनलाई शुरूमै बन्दुक चलाउन र ‘वर्गदुस्मन’ ‘सफाया गर्न’ रहर थियो । शक्तिको आडमा नागरिकका पिठ्युँमा लात्ती बजार्नेहरूलाई निमिट्यान बनाउने ‘सपना’ थियो । तर, उमेर बाधक भइदियो ।
“बाबु तिमी सानो छौँ, शुरूमा सञ्चारमा काम गर,” तिनताका जनमिलिसियाको कमान्डिङ गरिरहेका कसैले उनलाई ‘आदेश’ दियो । उनले दह्रोसँग बालमुट्ठी उचाल्दै आदेशको शिरोधार्य गरे । वल्लो गाविसबाट पल्लो गाविससम्म चिट्ठीपत्र आदानप्रदान गर्ने उनको ‘परिभाषित जिम्मेवारी’ थियो ।
यात्रा सजिलो थिएन । दिउँसो बम, गोली र दिउँसो नाइटभिजन हेलिकप्टरसँग छलिँदै चिट्ठिपत्र गन्तव्यमा पुर्‍याउनुपथ्र्यो । बीचमै पक्राउ परिए जनयुद्धको फौजी र राजनीतिक लडाइँका गुप्त योजना ‘दुस्मन’को पोल्टामा पुगिहाल्थ्यो ।
एउटा दुःखदायी घटना स्मरण गर्छन् उनी–
जेठमा भूमिगत भएका, साउनको दिन थियो त्यो । रात्रीको समय झमझम पानी परिहेको छ । जमिन नै थर्कनेगरी आकाश गर्जन्छ । त्यो भन्दा डरलाग्दो आवाज छ– कालिकोट सदरमुकाम मान्मा, खाँडाचक्रबाट सेनाले गर्ने फायरिङको ।
पार्टीले खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई दिनू भनेर चिट्ठीको मुठो थमाइदिएको छ । सेनाको बमबारुद छिचोलेर पारी गाउँ पुग्नै मुस्किल छ । जसोतसो घना जंगलमा वनबुट्यानले निलेको बाटो पहिल्याउँदै हिँडिरहेका छन् । वनको बीचमा पुग्नेबित्तिकै रात र निद्रा दुवैले छोप्यो । सामसून्न जंगल भएकाले बाघभालुको भय उस्तै छ । निद्राले अपहरण गरेपछि उनी जंगलकैबीच ओढारमा पल्टिए र छ्याङ्ग उज्यालो बनाए ।
“समाजवादको स्वादिलो सपना पस्किएकाले जस्तोसुकै चुनौती नाघ्ने साहस थियो । भोलि बिहान नहुँदै समाजवाद, साम्यवादमा पुगिन्छ भनेर जनयुद्धका कयौँ रात ओढारमा बितायौँ । अहिले सम्झन्छु– कसरी धूलाम्य भयो ती सपना ? नेतृत्वले परिवर्तनलाई कसरी अपहरण गरे । र, हाम्रो थाप्लामा मरण सुम्पिए,” विगतप्रति निकै पश्चाताप हुन्छ र, निकैबेर चुकचुकाउँछन् उनी ।
सञ्चार सम्हालेको ६ महिनामा बढुवा भएर उनी जिल्ला मिलिसियाको सदस्य बने । त्यसपछि लिस्ने गाउँ तेस्रो बटालियनअन्तर्गत जिल्ला प्लाटुनको सदस्य बने, २०५९ तिर । त्यसको ६ महिना नबित्दै मिलिसियाबाट सेनामा पदोन्नति भयो । र, बन्दुकसँग बल्ल चिनापर्ची भयो । शुरूको दिन बन्दुक चलाउँदाको रोचक अनुभूति छ उनीसँग । त्यतिबेला उनको भागमा भरुवा बन्दुक परेको थियो ।
आफूभन्ला तीनबित्ता लामो बन्दुक देखेर अताल्लिए उनी । सेना प्रवेश गर्ने सपनाले मस्तिष्कमा डेरा जमाएकाले बन्दुकप्रति मोह त थियो । तर, भरुवा बन्दुकमा गजले बारुद र लत्ता खाँद्दाखाँद्दा कहालिए । “पड्काउन पनि उस्तै गाह्रो भएको थियो, जे होस् बन्दुकसँगको सामीप्ता बाक्लिँदै गयो भनौँ,” अनुभूति पस्किन्छन् उनी ।
जनमुक्ति सेनामा रहँदा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका ठूला मोर्चामा फस्र्ट एसल्टमै रहेर आक्रमण–प्रत्याक्रमणमा भाग लिए ।
जनयुद्धका अधिकांश समय तरवारको धारमा बित्यो । जीवन जनयुद्धलाई ‘पैँचो’ दिइसकेकाले उनी बाँचेको समय नाफाको थियो । तर, एकदिन जीवनबाट मृत्यु अनायास उम्कियो । जम्काभेट भइसकेको मृत्युले त्यसरी उन्मुक्ति देला भनेर उनले शायदै कल्पना गरेका थिए ।
समय र साल ठ्याक्कै याद छैन उनलाई । विस्मृतिको गर्तमा गइसक्यो शायद । घटनामा ठाउँमात्रै याद छ । जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको थियो । युद्धविराम भङ्ग भएर राज्यसँग आमनेसामनेको अवस्था थियो । गुरिल्ला वारबाट आमनेसामने भीडन्तको अवस्थामा पुगिसकेको थियो, जनयुद्ध ।
कुलप्रसादसहित नौजना माओवादी छापामार कमान्डो ‘डेमो’का लागि कैलालीको धनगढी प्रस्थान गर्‍यो । लमीफाँटामा पुग्दा झमक्क साँझ परिहाल्यो । त्यही बास बसे उनीहरू । साउने सङ्क्रान्तिको महिना, उमंगले पुलकित थियो चौधरी बस्ती । त्यही उमंगमा मिसिए उनीहरू र बाह्र बजेतिर सेल्टर लिएको घरमा पुगे ।
उनीहरू आइपुगेको सेनाको सुराकीले थाहा पाइसकेछ । पाँच–पाँच जनाको ड्युटी बाँडियो । आधालाई कमाण्डरले सुत्न आदेश दिए । कुलप्रसाद पनि सुत्नेमै परे । भोलिपल्ट चार बजे ‘सक्रियता’ भन्ने प्लाटुनकी सदस्यले कुलप्रसादलाई उठाइन् र आफू सुतिन् । कुलप्रसाद ड्युटी गर्न बाहिर निक्लिएका मात्रै थिए, शाही सेनाले इँटाको पर्खालमै नाल तेस्र्याइसकेछ । फायर खोल्न तयारी हालतमा थियो बन्दुक ।
शाही सेनाले होइन, कालले घेरैझैँ भयो उनलाई । उम्किने छाँट छैन । अँध्यारो फाट्न केही समय त बाँकी छ । उनी भित्र पसे र मदन भन्ने कमाण्डरलाई ‘ब्रिफिङ’ गरे, “बाहिर सेनाले घेरिसकेको छ । जसरी हुन्छ, यहाँबाट हामीहरू उम्कनुपर्छ ।”
शुरूमा कमान्डर निस्किए । जस्केलापट्टिको ढोका खोलेर बाहिर मूल सडकमा निस्कन खोज्दै थिए । कम्मरबाट पेस्तोल त निकाले तर फायर खोल्न पाएनन् । सेनाको गोली लागेर उनी त्यहीँ ढले ।
कमाण्डर ढलेपछि छामापार छिन्नभिन्न भए । उताबाट सेनाको कमाण्डर चिच्याउँदै थिए, “गोली नहान् ज्यूँदै समात् !” तर हातमा पेस्तोल लिएका छापामारलाई नियन्त्रणमा लिने कसको हिम्मत ? सेनाले एकएक गर्दै सबैलाई निशाना बनायो । कोही धानखेतमा ढले । कोही सडकमा बजारिए ।
उनको साथमा त्यही ‘सक्रियता’ थिइन् । उनी पनि हातमा पेस्तोल लिएर सिधै पर्खाल नाघेर दश मिटरजति अगाडि बढे । दैवसंयोग भनौँ उनको अगाडि माछा पोखरी रहेछ । ज्यानको पर्वाह नगरी उनी त्यहीँ हामफाले । बङ्करजस्तो भयो त्यो । उनलाई हानेको गोली सक्रियतालाई लाग्यो । “ऐया..” उनले कंकलाशब्द सुने तर सक्रियतातर्फ फर्केरसम्म नहेरी सीधै धानखेततिर लागे ।
महावीर रेञ्जर बटालियनका तालिम प्राप्त सेनाले उनी भएतिर गोली बर्साउन थाल्यो । दश राउन्ड गोली चलेको आवाज उनले सुने । भाग्य नै भनौँ, त्यसमध्ये एउटा गोलीले पनि उनको शरीर छेडेन ।
अति नै भएपछि उनले हातको सकेट बमको पीन थुतेर पछाडि हुर्‍याए । करिब १५ मिटर पर पुगेर सकेट बम पड्कियो । उनी निहुरिएर धानखेतभित्र अलप भए ।
सकेटको धुवाँले सेना किंकर्तव्यविमूढ भयो । हुन सक्छ, दुईचारजना सैनिक घाइते पनि भए । बमको गन्ध हराएपछि धानको गाँजबाट मुन्टो निकालेर बम पड्काएको दिशातिर हेर्छन् त सेना नजिकै पो आइसकेछ, कुलेलम ठोके उनी ।
भाग्दै धानखेत काटिसकेका थिए । विशाल नहरमा पो पुगेछन् उनी । साउनमास, पानी बेस्करी परेकाले होला नहर उर्लिएर निल्ने आकारमा थियो । जनयुद्धका सुप्रिमो प्रचण्डले भनेको झल्याँस्स सम्झिए– पीडाका नुनिला आँसु पिएर मर्नुभन्दा गोली पिएर मर्नु बेस ।
मर्न अब गोली पिउनु पर्दैनथ्यो, पानी पिए पुग्थ्यो । झ्याम्म हाम फाले । त्यहाँ पनि भाग्य दाहिने पर्‍यो । रूखको लहरामा हात परेछ । पौडिएर नहर पार गरे । मुत्युबाट छलिए उनी । “पारी पुगेपछि पनि मुत्युको भय हटिसकेको थिएन । हसुलिया बेसक्याम्पको छेवैमा पुगेको थिएँ । दिउँसो र राति पनि त्यहीँको एउटा ठूलो रूखको टुप्पामा बसेर ज्यान जोगाएँ । भोलिपल्ट सेना गस्तीमा गएको मौका पारेर रूखबाट ओर्लिएँ र जंगल नजिकैकी वृद्ध आमैको घरमा सेल्टर लिएँ,” उनी सुनाउँछन् ।
चारदिनपछि मात्रै प्लाटुनको सम्पर्कमा पुगे उनी । त्यतिञ्जेल लमीफाटामा कुलप्रसाद पनि सहादत भएको खबर प्लाटुनमा पुगिसकेको रहेछ । प्लाटुनका सदस्यले घरमा पनि खबर पठाइसकेछन् ।
“बाबुआमा, दाइ त मेरो लास कुरेर पो बस्नुभएको रहेछ,” अझै दङ्ग पर्छन् उनी ।
२०६० साल चैत ७ गतेको मध्यरात । बेनी आक्रमणका लागि उनी बाग्लुङको ताराखोलाबाट म्याग्दीतर्फ सोझिए । अगाडि एक हजार बढीको डफ्फा हुँदो हो । लडाइँ जितिछाड्ने दृढ मनोबल थियो सबैको ।
उनीहरू बेनी पुग्नुअगावै आक्रमणको सूचना पुगिहालेछ । बजार नकट्नेबित्तिकै सेनाले फायर खोली हाल्यो । म्याग्दीको आकाशमा आगाका फिलिङ्गा उछिट्टिन थाले ।
आँखै अगाडि दुईजना ब्रिगेड भीसी ढले । पानीसमेत भन्न पाएनन् उनीहरूले । त्यसपछि निशानामा उनी परे । उनको कोखमा पनि आगाको झिल्को गाडिएझैँ भयो । तररर्र रगत बग्यो ।
उनी एसल्ट छाडेर चिकित्सकको सम्पर्कमा आए र प्राथमिक उपचार गरे ।
रगत बग्न रोकिएपछि उनी पुनः मोर्चातिर जाँदै थिए । “अहिले नजानू, फायर खोल्दा रगत पुनः बग्न सक्छ,” चिकित्सकले रोके उनलाई ।
ग्रिनेडको छर्रा लागेजस्तो भएको थियो उनलाई । तर एम३६ को छर्रा रहेछ । जनयुद्धले थमाएको बल्झिइरहने घाउ बन्यो । जनयुद्ध समाप्त भएको १२ वर्षसम्म उनी त्यही पीडा बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
१६ जना सर्वसाधारण, ३८ जना सुरक्षाकर्मी र ४२ माओवादी गुमाएको म्याग्ली लयमा फर्किइसकेको छ । तर, उनी विथोलिएका सपना र गिजोलिएको जिन्दगी बोकेर सडकमा भौँतारिइरहेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि लामो समय जुटपानी बसे, जनमुक्ति सेनाको अस्थायी क्याम्पमा । केही समय नवलपरासीको अरूणखोला, झ्याल्टुङ डाँडाको चौथो डिभिजनमा पनि अटाए । ०५८ मा भूमिगत भएका उनी ०६३ सम्म परिवारबाट विमुख भए । उनी घर पुगेनन् तर उनी मरेको खबर भने पटकपटक पुग्यो ।
जनयुद्धको भुंग्रोबाट उछिट्टिएर आएको सन्तान आँखा अगाडि पाउँदा परिवारको मन द्रविभूत त हुने नै भयो । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को पहिलो प्रमाणिकरणमा परे उनी । दोस्रोका बेला भने बज्रपात आइलाग्यो । प्रमाणिकरणको समय शुरू हुँदै थियो, उनको उनको टाउकामा बमको असर देखिन थाल्यो । कहिले टाउको अतिशय दुख्ने, कहिले नाकबाट रगत बग्ने । चितवनको बालकुमारी मेडिकल कलेजमा भर्ना भए । बालकुमारीमा समस्याको निदान सम्भव भएन । अस्पतालले अन्यत्रै ‘रेफर’ गर्‍यो ।
दोस्रो प्रमाणिकरणमा छुटे उनी । न समायोजनमा पर्न सके, न स्वेच्छिक अवकासको बाटो हिँड्न पाए । न ‘अयोग्य’ नै हुँ भन्न सक्छन् उनी । जनयुद्धमा पाँच वर्ष बगाएको रगत–पसिना बालुवामा पानी खन्याए सरह भो ।
कुलप्रसादका लागि ‘जनयुद्ध’को उपलब्धि भन्नु वीर अस्पतालको हनुमान फार्मेसीको पाँच लाख र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको साढे दुई लाख ऋण हो । नेपालीमा आहान छ– ऋण लागोस् तर दीन नलागोस् । ऋण र दीन दुवै लागेपछि मर्नु न बाँच्नु भएका छन् ।
१२ वर्षको अवधिमा सरकारलाई थुप्रैपटक झक्झक्याए । मन्त्री–सभासद् र ‘जनयुद्ध’का तत्कालीन हर्ताकर्ता सबैका टेवल धाए । कागजपत्र लिएर सत्ताको उपरी तहमा समेत पुगे । तर, गणतन्त्रको कुर्सीमा विराजमान सत्ताले उनलाई आँसुबाहेक केही दिएन ।
व्यवस्था बदल्न बन्दुक उठाउन हौस्याउनेहरू नै आज सत्ताशीन छन् । विडम्बना ! तिनको अनुहारमा पनि राजा–महाराजकै छायाछविले पुलुक्क चिहायो । यता औषधिको बिल भुक्तानी गर्न नसक्दा पेटको छर्रा निकाल्न सकिएको छैन । छर्रा ननिकाल्दा कतिबेला मृत्युले फणा उठाउने हो, भन्न सकिँदैन । माओवादीका तत्कालीन सैन्य कमाण्डर रामबहादुर थापा ‘बादल’ अहिले गृहमन्त्री छन् । किताबकापी बोक्ने उमेरमा बन्दुक थमाएका उनले उपचार खर्चको व्यवस्था गरिदेलान् भन्ने आश थियो ।
उपचार खर्च दिनु त परको कुरा, गृहमन्त्रीलाई भेट्ने समय पाउन समेत छाडे । गणतन्त्र ल्याउन बन्दुक उठाएकालाई नै सिंहदरबारले अघोषित प्रतिवन्ध लगायो । ‘गणतन्त्र’को चर्तिकलाबाट दिक्किएका उनले गत मङ्सिर पाँच गते गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा विष पिए । “जब जीवन विकल्पहीन बन्छ, मान्छेले विषको प्याला उचाल्न बाध्य हुँदो रहेछ,” मृत्यु छल्दै शान्ति प्रक्रियामा अवतरित उनी गणतन्त्रमा आइपुग्दा आत्महत्या गर्ने तहमा पुगे ।
छर्रा निकाल्न उपचार खर्च नदिएको सरकारले मृत्युको मुखबाट तत्कालका लागि बचायो । “बाँच्छु भन्दा राज्यले उपचार खर्च दिँदैन, मर्छु भन्दा मर्न पनि दिँदैन । गणतन्त्रले मलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ,” आँसु झारूँलाझैँ गर्छन् उनी । अस्पतालको शैय्यामा हुँदा उनलाई विषले पोल्यो । अस्पतालको शैय्याबाट बाहिर आउँदा ऋणले पोल्न थालेको छ ।
पोहोरमात्रै बिहे गरेकी जीवन–संगिनी, बाबुआमा, दाइप्रतिको कर्तव्य छँदैछ । यी सबै जीर्ण शरीरले कसरी धान्नू ! केही दिनअघि उनी पुनः गृहमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए । अचम्म ! ‘सिंहदरबार’ले उनलाई प्रतिवन्ध लगाएछ । “तपाईंलाई भित्र नपठाउने आदेश छ,” उनीमाथिको ‘फर्मान’ गेटमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले सुनाएपछि रुँदै फर्किए ।
“सिंहदरबार जनताको बैरी बनिसकेछ ! ज्यान अर्पेर ल्याएको परिवर्तन हाम्रै लागि शत्रू !,” त्यसदिनदेखि सरकारप्रतिको भरोसा टुटेको छ उनको । “दाइ ! बमको छर्रा बोकेर सडकमा दिनरात भौँतारिन कहाँ सकूँला र ! तर मेरो मृत्यु राज्यका लागि महँगो हुन्छ,” कुराकानीको अन्तिममा आँसु लुकाइरहन सकेनन् कुलप्रसादले ।